Xha ga mshelana nathi Isiseko soMvuzo | Uthando, ubulili kunye ne-Intanethi
Ikhaya Qhagamshelana nathi
Nxibelelana noMvuzo weSiseko-Uthando, isondo kunye ne-Intanethi ukufumanisa malunga nendlela yethu ezimeleyo esekwe kwinzululwazi ngesini kunye nemfundo yobudlelwane.
Siye samkelwa yiRoyal College yeeNgcali eziQhelekileyo yokuqhuba ii-workshops zemihla ngemihla kwimpembelelo ye-intanethi ye-intanethi kwimpilo yengqondo nangokwenyama. Nxibelelana nathi malunga neenkcukacha zeziganeko ezivulekileyo kunye noqeqesho lwangaphakathi. Oomasifundisane balungele nabani na onomdla kwimpembelelo yamanyala ekuziphatheni. Sisandula ukusungula iseti yezicwangciso zezifundo zootitshala kananjalo senza iintetho ezikolweni. Isisa sineeseshoni nabazali ukubanceda ukuba bafumane le ncoko intle malunga nomngcipheko wamanyala nabantwana babo.
Iselula: +44 (0) 7506 475 204
Igama lakho (* liyadingeka)
I-imeyili yakho (* iyadingeka)
IScottish Charitable Incorporated Organisation SC044948 [/ x_text]